Mampahafantatra Ireo Ankizy Alemàna Ny Tantara Marin’ireo Syriana Mpitsoa-ponenana Ny Boky Iray Ho An’Ankizy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2016 20:15 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Español, македонски, عربي, Ελληνικά, Deutsch, bahasa Indonesia, 日本語, Italiano, 繁體中文, 简体中文, English
Rahaf sy ny fianakaviany mitsoaka an'i Homs, Syria hakany Alemaina. Tompon'ny sary: Jan Birck
Nipoitra voalohany tao amin'ny PRI.org ny 20 Jona 2016 ity lahatsoratr'i Lucy Martirosyan ity, ary naverina navoaka teto ho ampahan'ny fifanarahana fizaràna votoaty.
Ankehitriny dia olona maherin'ny 65 tapitrisa no afindra monina noho ny fifandirana eto an-tany, taha ambony indrindra voarakitra hatrizay. Ankizy ny antsasak'ireo mpitsoa-ponenana ireo.
Naharay mpitsoa-ponenana maherin'ny 1 tapitrisa i Alemaina, ny ankamaroany avy any Syria sy Iràka. Na teo aza ny fankasitrahan'ireo mpanohana ireo hetsika nataon'ny Chancellier Angela Merkel tamin'ny voalohany, maro ireo Alemàna no manomboka miteny ny fanahiany mikasika ny fotoana hitsaharan'ny fanekena ireo mpifindra monina ireo.
Fa raha naneho fihetsika nifangaro mikasika ireo mpitsoa-ponenana ireo olon-dehibe any Alemaina, dia tian'ilay Alemàna mpanoratra, Kirsten Boie, kosa, ho tsapan'ireo ankizy farafaharatsiny fa ankizy toa ireo ankizy maneran-tany ny ankizy mpitsoa-ponenana.
Henoy ity tantara ity ao amin'ny PRI.org »
Tanatin'ny boky ho anà ankizy nosoratany farany, “Everything Will Be Alright” (Tsy Hisy Ampanahy), nanoratra ny tantara marin'i Rahaf sy ny fianakaviany izy, izay nitsoaka an'i Homs, Syria noho ireo daroka baomba ataon'ireo fiaramanidina mpiady. Nanavatsava ny Ranomasina Mediteraneana taminà sambokely ilay fianakaviana, ary ny farany dia nisafidy tanàna kely iray akaiky an'i Hambourg, Alemaina, mba hanomboka fiainam-baovao.
Navoaka tamin'ny teny Alemàna sy Arabo ilay boky, ary natao ho vakiana any an-tsekoly ho an'ireo ankizy teratany Alemàna sy ireo mpifindra monina mifanila aminy. (Afaka jerena ato ny dikateny Anglisy)
“Manana olona an'hetsiny ianao izay tsy vitan'ny hoe mandray tsara ireo mpitsoa-ponenana aty amintsika fotsiny, fa ihany koa manohana mafy azy ireo, izay mandany fotoana betsaka mba hanampiana azy ireo hianatra ny teny, hankany amin'ny dokotera, handeha any amin'ireo manam-pahefana sy ny sisa. Ary eo an-kilany, misy ireo olona sasany tena manohitra tanteraka ny fandraisana ireo mpitsoa-ponenana,” hoy i Boie. “Eo antenantenan'izany ireo ankizy ary ny loharanom-baovao voarain'izy ireo — dia, misy ireo ray aman-dreny miresaka ratsy mikasika ireo mpitsoa-ponenana, ny sasany kosa milaza zavatra hafa mihitsy. Ka nieritreritra aho fa hanome azy ireo fahafahana mahalala ny tena zava-mitranga ny fitantarana ny niainanà fianakaviana tena misy.”
Nandritra iny taona lasa iny, nifandray tamin'ireo fianakaviana mpitsoa-ponenana i Boie. Nilaza izy fa mety afaka nisafidy tantara “mahonena” kokoa ho tantaraina — tantara iray izay mety nahitàna fahaverezana bebe kokoa, herisetra ary alahelo — kanefa nisafidy ny hitantara fiainana iray “tsotra” kokoa izy. Manantena izy fa hanampy ireo ankizy Alemàna hahatsapa sy hametraka mora kokoa ny tenany eo amin'ny toeran'ireo ankizy mpitsoa-ponenana izany.
Ahitàna ampahanà fotoana mampitahotra hiaretan'ireto mpandray anjara fototra, izay mipetraka any Alemaina amin'izao fotoana, ilay boky. Tompon'ny sary: Jan Birck
Nandritra ny niasany tamin'ilay boky, nihaona tamin'i Rahaf sy ny anadahiny Hassan (tsy tena anaran'izy ireo), ary ny renin'izy ireo, i Boie. Raha tokony tonga dia niresaka ny herisetra sy ny ady izy roa mianadahy, dia nahatsiahy kosa ny tranony sy ireo namany ary ireo havana nilaozany tany. Farany dia nandrisika azy ireo tamin'ny teny Arabo hiresaka mikasika ireo haratsian'ny ady izay hijoroan'izy ireo vavolombelona ny reniny, hoy i Boie.
Mbola mifandray amin'i Rahaf sy Hassan i Boie— miaraka mandeha nijery horonantsary mihitsy aza izy ireo — fa tsy mieritreritra ny hanisy tohiny izy.
“Azoko antoka fa tsy hanao izany aho. Nanao izay zavatra rehetra tsy ahafahan'iza na iza hahafantatra ireo ankizy ireo aho. Novaiko mihitsy aza ny anarany — raha ny marina, izy ireo ihany no nanova izany. Nolazainy tamiko ny tian'izy ireo hiantsoana azy ao anatin'ilay tantara,” hoy i Boie.
Tamin'ireo famakiana nataon'i Boie, nanahy ny amin'ny fahasalaman'i Rahaf sy Hassan ireo tanora Alemàna sasany mpamaky. Nanomboka niraiki-po tamin'izy ireo mihitsy aza izy ireo.
“Mieritreritra aho fa tena malala-tsaina be mihitsy ireo ankizy. Rehefa maheno ny zavatra nandalovan'ireo ankizy izy ireo, dia te hahalala raha, ‘Afaka manampy azy ireo ve izahay? Ahoana no afaka hanampianay azy ireo? Inona no afaka ataonay mba hanamora ny fiainan'izy ireo?'” hoy i Boie.
“Anatin'ity tantaran'ireo ankizy Syriana roa ity, ireo mpampiampita ny ranomasina Mediteraneana dia mangalatra ny entan'izy ireo. Tanatin'ny entana dia misy ny saribakolin'ilay ankizivavy. Ary tena tsy faly tamin'ny fomba nahaverezan'ny saribakoliny mihitsy izy. Manomboka amin'ny fanontaniana toy izao foana ireo ankizy aty, ‘Tafaverina tany aminy ve ny saribakoliny?’ Mieritreritra aho fa ny anton'izany dia satria zavatra afaka saintsainin'izy ireo [hitranga] amin'ny tenany izany zavatra izany, kanefa kosa ireo baomba sy ady sy alina rehetra eny ambonin'ny ranomasina Mediteraneana… tsy vitany ny misaintsaina izany hitranga aminy.”
Mino i Boie, izay nanoratra boky mihoatra ny 60 ho an'ny ankizy sy tanora, fa hanampy ireo tanora hahatakatra ny zava-mitranga eto an-tany ireo tantara ireo.
“Ny tantara, araka ny eritreritro, dia manamora ny fahatakaran'ireo ankizy zavatra nóho ny fahalalàna ara-kevitra be fotsiny. Mieritreritra aho fa izay ny vintana ananantsika,” hoy i Boie.